Voaheloka ireo atidoha tao ambadiky ny vono olona tany Ampatuan saingy mbola mitohy ny ady amin’ny tsimatimanota ao Filipina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Desambra 2019 7:05 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Español, Português, English
Vondrona Media, artista, ary mpandala ny zon'olombelona mivory tamin'ny andron'ny 23 Novambra 2019 tao Manila miantso ny hanagadrana ireo atidoha nikotrika ny fandripahan-dry Ampatuan olona. Loharano: Altermidya Facebook
Fitsarana an-toerana iray tao Filipina no nanameloka ireo mpikambana ao amin'ny fianakaviana Ampatuan sy ireo mpiray tsikombakomba amin-dry zareo higadra 40 taona noho ny famonoana olona miisa 58 — ary mpanora-gazety ny 32 amin'ireo — tamin'ny taona 2009.
Tamin'ny 23 Novambra 2009, nisy vondrona iray nanome fotoana hametraka ny firotsahan-kofidiana tao amin'ny faritanin'i Maguindanao, miorina ao amin'ny nosy atsimonin'i Mindanao, voasakana teo amin'ny toeram-pisavana iray an'ny tafika an'olontsotra an'ny fianakaviana Ampatuan. Naripaka ireo izay tao anatin'ny tandahatry ny fiara, ary tao anatin'izany ireo mpanora-gazety izay nanangombaovao niaraka tamin-dry zareo, ary nalevina haingana tao amin'ny toerana.
Io no fanafihana nahafatesana olona avy amin'ny gazety be indrindra no sady herisetra ratsy indrindra mifandraika amin'ny fifidianana teo amin'ny tantaran'i Filipina.
Nanao fanentanana hisian'ny rariny ireo mpanandratenin'ny media sy ny vondrona mpandala ny zon'olombelona tao anatin'ny folo taona. Nataon-dry zareo izay hamelomana hatrany ny raharaha sady narahiny maso ny raharaha mba hahameloka an-dry Ampatuans. Nanameloka ihany ny atidohan'ny famonoana ny fitsarana tao an-toerana nony farany tamin'ny 19 Desambra 2019.
Saingy tsy nitsahatra hatreo ny fanentanana. Mbola 80 any ho any farafahakeliny ireo ahiahiana mbola miriaria any. Heverina mbola hampakatra ny raharaha ihany koa ry Ampatuans ary mety ho tonga hatrany amin'ny Fitsarana Tampony izany.
Mandritra izany fotoana izany, nanasongadina ny mahazavadehibe izao fanamelohan'ny fitsarana izao ny Sendikà Nasionalin'ny Mpanora-gazety ao Filipina:
Tsy ho afaka mamerina ny ain'ireo lasibatra sy ny fangirifirian'ny fianakavina namoy ny tiany ny fanamelohana sy ny fanonerana.
Fa ireo, amin'ny lafiny sasany, no hanamaivana ny hirifiry niaretan-dry zareo tao anatin'ny folo taona.
Ankatoavin'ny vondrona ihany koa ireo tsy nitsahatra tamin'ny fitadiavan-drariny tao anatin'izay folo taona izay:
Noho ny firaisan-kina sy ny faharetan'ireo mpiasan'ny fampitam-baovao sy ireo vondrona fampitam-baovao ao amin'ny firenena sy any ivelany izay nanohana ny fanentanana sy ny ezaka nandritra ny 10 taona farany no nahatonga ny fanamelohana ireo lehibe amin'ny voampanga mba hahazoana antoka fa tsy hohadinoina ny vono olona ary ho tratra ny rariny na hafiriana na oviana ny faharetany sy ny fahasarotana hahatongavana amin'izany.
Altermidya, tambajotran'ireo vondrona fampitam-baovao tsy miankina, nanamarika fa hitohy ny fanentanana iadiana amin'ny tsimatimanota:
Ankoatra izay, mbola mitoetra ny fanomezam-bahana ny mpitarika ady, ny patirao ara-politika ary ireo toe-javatra rehetra nahatonga ny loza nitranga folo taona lasa izay. Mbola tsy voakitikitika mihitsy ireo eny an-tampon'ny tsimatimanota.
Tonga teo amin'ny fahefana ny fitondran'i Rodrigo Duterte tamin'ny taona 2016. Tao anatin'ny telo taona, dia mpanao gazety am-polony no maty noho ny fanatontosan'izy ireo ny adidiny fotsiny amin'ny fampahafantaram-baovao amin'ny vahoaka.
Nisy ny hetsika fiaretan-tory sy fandrehetana labozia nokarakarain'ireo vondrona fampitam-baovao mialoha ny fotoana nanambarana ny didim-pitsarana. Nanatrika izany ny sasany tamin'ny fianakavian'ireo lasibatra tamin'ny famonoana.
Mampahatsiahy ny loza mahatsiravina i Ate Emely, havan'ny iray tamin'ireo lasibatra, ary mitaky ny rariny ho an'ny havany maty.
Nandritra ny andro famoahana ny fanapahan-kevitry ny fitsarana, nanatevin-daharana ireo mpikatroky ny fampitam-baovao ireo vondrona mpiaro ny zon'olombelona nandritra ny fihetsiketsehana miandry ny fanambarana.
Manohy ny fandaharan'asan'izy ireo.eto ivelan'ny fefin'ny Toby Bagong Diwa ireo vondrona isan-karazany tahaka ny “Sendikà Nasionalin'ireo mpanao gazetin'ny Filipina.” Nosakanan'ireo polisy talohaloha kokoa ny programa
Niaraka tamin'ny zanak'ireo niharam-boina ilay mpanao gazety Kath Cortez no sady manaramaso ny fanambaran'ny fitsarana tao Mindanao. Mizara ny fiantraikan'ny fanapahan-kevitra tamin'ireo zanaka izy.
Izao vao mba azoko ny zavatra nitranga. Sarotra ny zava-nitranga androany indrindra hatramin'ny niarahan'ireo zanaky ny lasibatra taminay. Tsy toa antsika, sarotra kokoa ho azy ireo ny mizaka ny fanapahan-kevitry ny fitsarana noho ny zavatra niaretan'izy ireo.
Na izany aza, miarahaba azy ireo aho noho ny tanjaka sy ny herim-pon'izy ireo niatrika ny fampitam-baovao na dia miady mafy aza fihetseham-po tao amin'izy ireo. Mazava sy matanjaka ny faharesen-dahatr'izy ireo hiady ho an'ny rarihy ho an'ny hava-tian'izy ireo.
Fotoana mampihetsi-po izany kanefa tsy taitra mihitsy ireo ankizy. Manantena aho fa afaka manahaka azy ireo isika satria tsy mbola tapitra ny ady